अब सरकारले लगाउने लकडाउन कस्तो हुन्छ ? रक्षामन्त्री पोखरेलले दिए यस्तो जवाफ – Jagaran Nepal
अब सरकारले लगाउने लकडाउन कस्तो हुन्छ ? रक्षामन्त्री पोखरेलले दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौं । लकडाउनलाई लिएर सरकारले नयाँ तयारी थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अब सोलोडोलो रूपमा लकडाउन नहुने खुलाउनु भएको छ । सुरूवाती दिनहरूमा सबैतिर एउटै किसिमको लकडाउन गरिएको भए पनि अब सं’क्रमणको अवस्था हेरेर ठाउँअनुसार लकडाउन हुने पोखरेलको भनाइ रहेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सं’कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिका संयोजकसमेत रहनु भएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सोमबार बिहान यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले सामान्य अवस्था नआउँदासम्म भीडभाड हुने ठाउँहरू बन्द रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।सरकारले मोडालिटीअनुसार नै लकडाउन अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ । पोखरेलका अनुसार स्कुल, सावर्जनिक यातायात, सिनेमा, ठूला रेष्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदैनन् ।
सार्वजिनक सभा समारोह पनि गर्न पाइँनेछैन । सं’क्रमण भएर सोचेभन्दा भ’या’व’ह ढंगले आयो भने निश्चित क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सिल गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । तर पहिलाजस्तो गरी सबैतिर बन्द हुँदैन।मन्त्री पोखरेलले सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको भन्दा पनि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेको जानकारी दिनुभयो । जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनको नयाँ मोडालिटी बनाएको थियो । त्यसपछि मानिसको आवतजावतलाई केही खुकुलो पारिएको छ भने दैनिक गतिविधि पनि बढेका छन् ।